Vaovao - Pipe vy mazava tsara
Ny fantsom-panafody dia mihombo amin'ny alàlan'ny fandeferana amin'ny refy avo lenta, ary atolotra amin'ny hatsiaka voasintona na mangatsiaka mihodina, natsipy, na nohosorana na ambonin'ilay namboarina.
Ny fantsom-boaloboka marina dia fitaovana fantsom-boaloboka avo lenta voahodina amin'ny alàlan'ny sary mangatsiaka na ny fihodinana mafana. Satria ny rindrina anatiny sy ivelany misy fantsom-by marina dia tsy misy sosona oksida, tsindry avo tsy misy famoahana, avo lenta, malama, avo lenta tsy misy fanovana, fipoahana, fisolahana ary tsy misy triatra, dia ampiasaina hamokarana pneumatika na hidraulika toy izany. toy ny varingarina na ny varingarina dia mety ho fantsona tsy misy fantsona na fantsona fantsona. Ny fantsom-by vy mazava tsara dia manana refy avo lenta sy avo lenta, malamalama anatiny sy ivelany amin'ny fantsona. Aorian'ny fitsaboana hafanana dia tsy misy horonantsary oksida amin'ny faritra anatiny sy ivelany amin'ny fantsona. Ny fantsom-boaloboka dia mirehitra ary mihosin-dra tsy misy triatra, miorina amin'ny hatsiaka tsy misy fiovana, ary mahazaka tsindry mafy. hanaovana ny. Ny fantsom-by vy marina dia be mpampiasa amin'ny fiara, môtô, fiara elektrika, petrochemicals, herinaratra, sambo, aerospace, bearings, singa pneumatika, fantsom-by tsy misy seam ho an'ny vovo antonony sy ambany, sns, ary azo ampiharina amin'ny tanany vy, bearings, hydraulika, machining, sns.
OD: 3 hatramin'ny 101 mm WT: 0,5 - 20 mm
Araka ny hateviny, ny fantsom-pahalalana azo zaraina ho fantsona matevina ary rindrina matevina
Ny fantsom-boaloboka marina dia be mpampiasa amin'ny fiara, môtô, fiara elektrika, petrochemical, herinaratra elektrika, sambo, aerospace, fitaterana, singa pneumatika, fantsom-by vy tsy misy fantsom-boalavo antonony sy ambany ary azo ampiasaina amin'ny tanany vy, mitondra, hydraulic , fanodinana mekanika ary sehatra hafa.
Volavola vy - Fanaraha-maso - Fanafanana - fanindronana - fikajiana ny pickling - fikosoham-bolo - fanosorana sy fanamainana rivotra - fanodinana mangatsiaka - fihenan'ny - fanapahana - fisavana - fanamarihana - fonosana vita vita
Ny fandeferana amin'ny fantsona marina:
Ny OD na ID + -0.2mm